तपाईंको पूरा गाइडलाई रिदमबक्समा
लिनक्स कुञ्जी अवधारणाहरू
पूर्ण गाइडलाई ताल्मोबक्समा
by गैरी न्यूल
लिनक्स वितरण केवल यसको भागको राशिको रूपमा, र स्थापना र डेस्कटप वातावरण भन्दा धेरै राम्रो छ, यो अन्ततः ती अनुप्रयोगहरू कुन कुरा हो।
लयबक्स लिनक्स डेस्कटपको लागि उपलब्ध सबै भन्दा अडियो अडियो प्लेयरहरू हुन् र यो मार्गदर्शकले तपाइँलाई सबै सुविधाहरू प्रदान गर्ने प्रस्ताव देखाउँदछ। तालबक्सले स्पष्ट देखि सुविधाहरू समावेश गर्दछ, संगीत आयात गर्न क्षमता र प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्ने क्षमता जस्तै, एक अद्वितीय अडियो सर्भरको रूपमा ताल्मोबक्स सेट अप गर्ने क्षमता जस्तो।
01 को 14
तपाईंको कम्प्युटरमा फोल्डरबाट संगीत रिटबक्समा आयात गर्नुहोस्
संगीतमा तातो आयात गर्नुहोस्।
Rhythmbox प्रयोग गर्न, तपाईंलाई एक संगीत पुस्तकालय बनाउन आवश्यक पर्दछ।
तपाईंसँग विभिन्न विभिन्न ढाँचाहरूमा संगीत भण्डार भएको हुन सक्छ। यदि तपाईंले आफ्नो सबै सीडीहरू एमपी3ढाँचामा पहिले नै परिवर्तन गर्नुभयो भने Rhythmbox मा प्ले गर्न संगीत प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा सजिलो तरीका यो तपाइँको कम्प्युटरको फोल्डरबाट आयात गर्न हो।
यो गर्नका लागि "आयात" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
"एक स्थान छान्नुहोस्" ड्रपडाउन क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको कम्प्युटरमा एउटा फोल्डर छान्नुहोस् जुन संगीत समावेश छ।
तल्लो विन्डो अब ट्यूनसँग भर्नै पर्छ। रथमबक्स, एमपी 3, WAV, OGG, FLAC आदि सहित सबै अडियो स्वरूपहरू प्ले गर्न सेट अप गरिएको छ।
यदि तपाइँ फेडोरा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो गाइडलाई ताल्चाबक्समार्फत MP3s प्ले गर्न सम्भव बनाउनको लागि आवश्यक पर्दछ।
अब तपाईं अब वा "सबै सङ्गीत आयात गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस् सबै अडियो फाईलहरू आयात गर्न वा तपाईँले माउससँग चयन गर्न चाहानु भएको फाइलहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
टिप: पाना पट्टीलाई तल राख्नुहोस् र माउससँग तान्नुहोस् धेरै फाइलहरू चयन गर्न को लागी समूहबद्ध गर्नुहोस् वा CTRL हटाउनुहोस् र माउससँग क्लिक गर्नुहोस् बिभिन्न स्पेसहरू खाली गरी चयन गर्नुहोस्।
02 को 14
एक सीडीबाट रिटमोबक्समा संगीत आयात गर्नुहोस्
सीडीबाट संगीत आयात गर्नुहोस् तालबक्समा।
रिदमबक्सले तपाईंलाई सीडीबाट तपाईंको संगीत फोल्डरमा अडियो आयात गर्न दिन्छ।
ट्रेमा सीडी घुसाउनुहोस् र ताल्मोबक्स भित्रबाट "आयात" क्लिक गर्नुहोस्। "स्थान चयन गर्नुहोस्" ड्रपडाउनबाट सीडी ड्राइभ छान्नुहोस्।
सीडीबाट गीतहरूको सूची उत्पन्न गरिनु पर्छ र तपाईं तिनीहरूलाई "हटाउनुहोस्" क्लिक गरी सिधै आफ्नो संगीत फोल्डरमा निकाल्न सक्नुहुनेछ।
ध्यान दिनुहोस् कि पूर्वनिर्धारित फाईल ढाँचा "OGG" हो। फाइल ढाँचा "MP3" मा परिवर्तन गर्न तपाईँले मेनुबाट "प्राथमिकताहरू" खोल्न र "संगीत" ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्दछ। मनपर्ने ढाँचा "MP3" मा परिवर्तन गर्नुहोस्।
पहिलो पटक तपाईँले प्रयास गर्न र एमपी3लाई हटाउनुहुनेछ तपाईंले बताउनुभएको त्रुटि पाउन सक्छ कि सफ्टवेयरलाई त्यो ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनुको लागि स्थापित हुन आवश्यक छ। स्थापना स्वीकार्नुहोस् र एमपी3प्लगइनका लागि खोजी गर्दा। अन्तमा, GStreamer उजुरी प्याकेज स्थापना गर्न निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
फाइलहरू अब तपाइँको संगीत फोल्डरमा आयात गरिनेछ र स्वचालित रूपमा ताल्मबक्सद्वारा प्ले गर्न उपलब्ध गराइनेछ।
03 को 14
कसरी rhythmbox मा एक FTP साइट बाट संगीत आयात गर्न
FTP साइटबाट ताल्मोबक्समा आयात गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ एक सांप्रदायिक स्थानमा घुमाइरहेका हुनुहुन्छ जहाँ त्यहाँ एफटीपी सर्भरमा संगीत छ, तपाईं एफटीपी साइटबाट Rhythmbox मा आयात गर्न सक्नुहुनेछ।
यो मार्गदर्शकले तपाईंलाई डेस्कटप वातावरणको रूपमा GNOME प्रयोग गरिरहेको छ। नाउलस खोल्नुहोस् र मेनुबाट "फाईलहरू - जडान गर्नुहोस् सर्भर" चयन गर्नुहोस्।
FTP ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्, र जब सोधिन्छ, पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। (जबसम्म यो गुमनाम नगरिएको छैन, कुन अवस्थामा तपाईँले पासवर्ड आवश्यक पर्दैन)।
रिल्टबक्समा फर्कनुहोस् र "आयात" मा क्लिक गर्नुहोस्। अब "एक स्थान छान्नुहोस्" ड्रपडाउनबाट तपाईंले एफटीपी साइटलाई विकल्पको रूपमा हेर्नु पर्छ।
फाइलहरूलाई आयात गर्नुहोस् जसरी तपाइँले तपाइँको कम्प्युटरमा स्थानीय स्थानीय फोल्डरमा ल्याउनुहुनेछ।
04 को 14
A DAAP ग्राहकको रूपमा रिदमबक्स प्रयोग गर्दै
A DAAP ग्राहकको रूपमा रिदमबक्स प्रयोग गर्दै।
DAAP डिजिटल अडियो पहुँच प्रोटोकल को लागि खडा छ, जो मूल रूप देखि विभिन्न उपकरणों को लागि संगीत को सेवा को एक तरिका प्रदान गर्दछ।
उदाहरणका लागि, तपाइँ एक कम्प्युटरलाई DAAP सर्भरको रूपमा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र DAAP क्लाइन्ट चलाउन सञ्जालमा हरेक अन्य यन्त्रले त्यो सर्भरबाट संगीत प्ले गर्न सक्षम हुनेछ।
यसको अर्थ तपाईं कम्प्युटरमा DAAP सर्भरको रूपमा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसका सर्भरबाट एन्ड्रोईड फोन वा ट्याब्लेट, एक विन्डोज पीसी, एक विन्डोज फोन, एक Chromebook, एक आईप्याड, आईफोन र एक म्याकबुकमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ।
लयबक्स लिनक्स आधारित कम्प्युटरहरूमा DAAP क्लाइन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाइँले गर्न आवश्यक छ स्क्रिनको तल बायाँ कुनामा रहेको प्लस प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् र "DAAP साझेदारीमा जडान गर्नुहोस्" छनौट गर्नुहोस्।
केवल DAAP साझेदारीको लागि आईपी ठेगाना प्रविष्टि गर्नुहोस् र फोल्डर "साझा गरिएको" हेडिंग अन्तर्गत सूचीबद्ध गरिनेछ।
अब तपाईं DAAP सर्भरमा सबै लिनक्सहरू तपाइँको लिनक्स कम्प्युटरमा प्ले गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
नोट गर्नुहोस् कि iTunes DAAP सर्भरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ताकि तपाईं iTunes मा तपाइँको लिनक्स कम्प्युटरको साथमा संगीत साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ
05 को 14
तालबक्सको साथ प्लेसूचीहरू सिर्जना गर्दै
तालबक्सको साथ प्लेसूचीहरू सिर्जना गर्दै।
Rhythmbox भित्र प्लेलिस्टहरूमा सिर्जना गर्न र थप संगीतहरू सिर्जना गर्ने तरिकाहरू छन्।
एक प्लेलिस्ट सिर्जना गर्नको लागि सबैभन्दा सरल तरिका प्लस प्रतीकमा क्लिक गर्न र मेनुबाट "नयाँ प्लेलिस्ट" चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाइँ प्लेसूचीको लागि एक नाम प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
"लाइब्रेरी" भित्र "संगीत" मा प्लेलिस्टमा ट्र्याक थप्न र तपाईंले प्लेसूचीमा थप्न चाहानु भएको फाइलहरू फेला पार्नुहोस्।
फाईलहरूमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र "प्लेलिस्टमा थप्नुहोस्" चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि प्लेसूची चयन गर्नुहोस् फाइलहरूलाई थप्नका लागि। तपाइँले "नयाँ प्लेलिस्ट" थप्नु भएको छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन, जुन, नयाँ प्लेलिस्ट सिर्जना गर्ने अर्को तरिका।
06 को 14
एक स्वचालित प्लेसूची सिर्जना गर्नुहोस् तालाबक्समा
एक स्वचालित तालबक्स प्लेलिस्ट सिर्जना गर्नुहोस्।
त्यहाँ एक फरक प्रकारको प्लेलिस्ट हो जुन तपाईले स्वचालित प्लेलिस्टलाई सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
तल बायाँ कुनामा प्लस प्रतीकमा स्वचालित प्लेलिस्ट सिर्जना गर्न क्लिक गर्नुहोस्। अब "नयाँ स्वचालित प्लेलिस्ट" मा क्लिक गर्नुहोस्।
स्वत: प्लेलिस्टले तपाईंलाई आधारभूत मापदण्डहरू चयन गरेर एक प्लेलिस्ट सिर्जना गर्न दिन्छ जुन यसमा "प्रेम" शब्दको शीर्षकमा सबै गीतहरू चयन गर्दछ वा 160 बिट प्रति मिनेट भन्दा बढी बिटरेटको साथ सबै गीतहरू छनौट गर्दछ।
तपाईं मापदण्डहरूलाई कम गर्न र मापदण्ड विकल्पहरू मिलाउन सक्नुहुनेछ र तपाइँले चाहिएको केवल गीतहरू छान्नुहोस्।
प्लेसूचीको भागको रूपमा सिर्जना गरिएको गीतहरूको संख्या सीमित गर्न वा सम्भवतः प्लेलिस्ट अन्तिम समयको लम्बाइ सीमित गर्न सम्भव छ।
07 मध्ये 14
भित्र लयबक्सबाट एक अडियो सीडी सिर्जना गर्नुहोस्
Rhythmbox बाट एक अडियो सीडी सिर्जना गर्नुहोस्।
रिदमबक्स भित्रबाट अडियो सीडी सिर्जना गर्न सम्भव छ।
मेनुबाट प्लगइन चयन गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् "अडियो सीडी रिकर्डर" चयन गरिएको छ। तपाइँलाई "Brasero" लाई तपाइँको प्रणालीमा स्थापित गरिएको निश्चित गर्न आवश्यक पर्दछ।
अडियो सीडी सिर्जना गर्नको लागि एउटा प्लेलिस्ट चयन गर्नुहोस् र "अडियो सीडी सिर्जना गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
सञ्झ्यालमा गीतहरू सूचीमा देखा पर्नेछ र यदि सीडीमा भएका गीतहरू तपाइँ सीडी जलाउन सक्नुहुनेछ वा अन्यथा सन्देश देखिन सक्छ भनेर पर्याप्त ठाउँ छैन। तपाईं बहुविध सीडीहरूमा जलाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं एक सीडी जलाउन चाहानुहुन्छ र धेरै धेरै गीतहरू छन् भने हटाउनका लागि केहि गीतहरू चयन गर्नुहोस् र मेटाउनको लागि क्लिक गर्नुहोस्।
जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ सीडी सिर्जना गर्न "जर्न" क्लिक गर्नुहोस्
08 को 14
रिदमबक्स प्लगइनहरूमा एक नजर
Rhythmbox मेनुबाट "प्लगइन" चयन गर्नुहोस्।
त्यहाँ धेरै प्लगइनहरू उपलब्ध छन् जस्तै सन्दर्भ मेनु फलक कलाकार, एल्बम र गीतको विवरण देखाउँछन्।
अन्य प्लगइनहरूमा "आवरण कला खोजी" समावेश छ जुन एल्बमको साथमा प्रदर्शन गरिएको गीतको साथ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। "DAAP संगीत साझेदारी" लाई ताल्मोबक्सलाई DAAP सर्भरमा "एफएम रेडियो समर्थन", "पोर्टेबल खेलाडी समर्थन" लाई बदल्न तपाईंलाई सक्षम पार्न एमटीपी उपकरणहरू र आईपडहरू प्रयोग गर्नुहोस् तालबक्समा।
थप प्लगइनहरूमा "गीत गीत" समावेश गरिएको गीत गीतहरू प्रदर्शन गर्नका लागि प्ले गीतहरू र "ट्र्याकहरू पठाउनुहोस्" को लागी तपाईंलाई ईमेल मार्फत गीतहरू पठाउनको लागि समावेश गर्दछ।
त्यहाँ दर्जनौं प्लगइनहरू उपलब्ध छन् जुन ताल्मोबक्समा विशेषताहरू विस्तार गर्दछ।
09 को 14
रिथमोबक्स भित्र गीतहरू गीतहरूको लागि देखाउनुहोस्
रिथमोबक्स भित्रको गीत देखाउनुहोस्।
तपाईं रिथमोबक्स मेनुबाट प्लगइनहरू चयन गरेर बजाउने गीतको लागि गीत देखाउन सक्नुहुन्छ।
निश्चित गर्नुहोस् "गीत गीत" प्लगइन बक्समा चेक छ र "बन्द" मा क्लिक गर्नुहोस्।
तालबक्स मेनुबाट "दृश्य" र त्यसपछि "गीत गीतहरू" चयन गर्नुहोस्।
10 मध्ये 14
रिथमोबक्स भित्र भित्र इन्टरनेट रेडियो सुन्नुहोस्
इन्टरनेट रेडियो रिथबक्स भित्र।
तपाईं Rhythmbox भित्र अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नका लागि, लाइब्रेरी फलक भित्र "रेडियो" लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्।
अम्बिएन्टबाट भूमिगतबाट विभिन्न कोटीहरूमा रेडियो स्टेशनहरूको सूची देखा पर्नेछ। तपाईंले सुन गर्न मनपर्ने रेडियो स्टेशन चयन गर्नुहोस् र प्ले प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ रेडियो सुन्न चाहानुहुन्छ भने "थप गर्नुहोस्" मा क्लिक नगर्नुहोस् र रेडियो स्टेशनको फिडमा URL प्रविष्ट गर्नुहोस्।
शैली परिवर्तन गर्न, रेडियो स्टेशनमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र गुणहरू छनौट गर्नुहोस्। ड्रपडाउन सूचीबाट शैली छनौट गर्नुहोस्।
11 मध्ये 14
रित्बक्स भित्र पोडकास्ट सुन्नुहोस्
रित्बक्स भित्र पोडकास्ट सुन्नुहोस्।
तपाईं Rhythmbox भित्र आफ्नो मनपर्ने पोडकास्ट सुन्न सक्नुहुन्छ।
पोडकास्ट पत्ता लगाउन, पुस्तकालय भित्र पोडकास्ट लिंक चयन गर्नुहोस्। खोजी पोष्टमा पाठ प्रविष्ट गरेर पोडकास्ट प्रकारको खोजी गर्नुहोस्।
जब पोडकास्टहरूको सूची फर्काउँछ, तपाईहरू सदस्यता लिन चाहानुहुन्छ र "सब्सक्राइब" क्लिक गर्नुहोस्।
उपलब्ध छन् कुनै पनि एपिसोडहरू साथसाथै सदस्यता लिइएको पोडकास्टहरूको सूची प्रकट गर्न "बन्द" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
12 मध्ये 14
आफ्नो डेस्कटप कम्प्यूटर कम्प्युटरलाई रिडियामबक्स प्रयोग गरेर एक अडियो सर्भरमा बदल्नुहोस्
तपाईंको DAAP सर्भरमा तपाइँको डेस्कटप कम्प्युटर खोल्नुहोस्।
पहिले यो मार्गदर्शिकामा तपाईंले देखाउनु भएको थियो कि Rhythmbox कसरी DAAP सर्भरसँग एक ग्राहकको रूपमा जडान गर्न प्रयोग गर्ने।
रिदमबक्स पनि DAAP सर्भर पनि हुन सक्छ।
रिदमबक्स मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र प्लगइनहरू चयन गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् "DAAP संगीत साझेदारी" वस्तु बक्समा चेक छ र "बन्द" मा क्लिक गर्नुहोस्।
अब तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइड ट्याब्लेट, आईपड्स, आइप्याड, अन्य ट्याबलेट, विन्डोज कम्प्युटरहरू र अन्य लिनक्स आधारित कम्प्यूटरमा Google Chromebook हरु बाट तपाइँको संगीत लाइब्रेरीमा जडान गर्न सक्नुहुनेछ।
13 मध्ये 14
कीबोर्ड शर्टकटहरू रिथमोबक्स भित्र
त्यहाँ धेरै उपयोगी किबोर्ड सर्टकटहरू छन् जुन तपाइँ रिदमबक्स भन्दा बढी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ:
CTRL + P - प्ले / पज गर्नुहोस्
CTRL + बायाँ तीर - अघिल्लो पथ / ट्र्याक सुरु
CTRL + दाँया तीर - अर्को ट्र्याक
CTRL + माथि तीर - भोल्यूम बढाउनुहोस्
CTRL + तल तीर - भोल्युम घटाउनुहोस्
CTRL + R - दोहोरो दोहोरो प्ले टगल गर्नुहोस्
CTRL + U - टगल गर्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्
CTRL + A - सबै चयन गर्नुहोस् (यद्यपि संगीत पुस्तकालयमा सबै पटरिहरु चयन गर्नुहोस्)
SHIFT + CTRL + A - सबै चयन नगर्नुहोस्
CTRL + J - गीत बजाउन जानुहोस्
ALT + S - खोज फिल्डमा जानुहोस्
ALT + फर्कनुहोस् - ट्र्याक गुणहरू देखाउनुहोस्
CTRL + Q - रिटमबक्स छोड्नुहोस्
CTRL + B - ब्राउजर देखाउनुहोस् / लुकाउनुहोस्
F9 - साइड फलक देखाउनुहोस् / लुकाउनुहोस्
CTRL + K - लाम साइडबार लुकाउनुहोस् / लुकाउनुहोस्
F11 - पूर्ण स्क्रिन मोड बन्द र बन्द गर्नुहोस्
विशेष किबोर्डहरूको लागि मल्ट्यामी कुञ्जी र अवरक्त रिमोटहरूसँग अन्य सर्टकटहरू छन्। तपाईं यी नियन्त्रणहरूमा एक गाइडको लागि ताल्मोबक्स भित्र मद्दत कागजात हेर्न सक्नुहुन्छ।
14 मध्ये 14
रिदमबक्समा पूर्ण गाइड।
यो गाइडले Rhythmbox भित्रका धेरै विशेषताहरू हाइलाइट गरेको छ।
यदि तपाइँलाई थप जानकारी आवश्यक छ भने ताल्मोबक्स भित्र मद्दत कागजातहरू वा निम्न मार्गदर्शकहरूमध्ये एउटा हेर्नुहोस्:
तपाईंको आइपडलाई रिटमोबक्स प्रयोग गरेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने
सर्वोत्तम र Worst Linux लिनक्स इमेल क्लाइन्ट्स
Verbose आउटपुट को परिभाषा
Ubuntu एकता बना Ubuntu GNOME
Ubuntu लन्चरमा पूर्ण गाइड
Linux मा I586 के हो?
8 उत्तम विन्डोज लिनक्स र अन्य अपरेटिङ सिस्टम क्लोन्स
Linux को लागि सर्वश्रेष्ठ क्लासिक गेम एमिलेटरहरु मध्ये 6
लिनक्समा पाठ टर्मिनलहरू
आईओएस 7: आधारभूत
कसरी Internet Explorer7ActiveX नियन्त्रणहरू मेटाउने
क्या Throwback गुरुवार वास्तवमा छ र यो किन लोकप्रिय छ
IOS मेलमा थप स्मार्ट इनबक्स फोल्डरहरू कसरी थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्
कुल युद्ध श्रृंखला
Verizon स्पीड टेस्ट
शीर्ष ब्लग तथ्याङ्क ट्रयाकहरू
यो एप्पल टिभी किन हजारौं टिभीको लागि सही समाधान हो
पिन्चुशियन विरूपण के हो?
आईफोनमा समान समय फोटो र रेकर्ड भिडियो कसरी लिन्छ
आईफोन रिकवरी मोडबाट कसरी र बाहिर प्राप्त गर्ने
रिकभरी विभाजनमा म्याक ओएसको संस्करण कसरी पहिचान गर्ने?
आइपॉड नानोमा कसरी गीतहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ?
वीपीएन को लाभ र लाभ के हो?
Google पानाहरूमा AND र OR तार्किक प्रकार्य कसरी प्रयोग गर्ने
के मेरो आईप्याडले मेरो आईफोनको डेटा जडान प्रयोग गर्न सक्छ?
भिडियो गेम धोखा कोडहरू के हो?
PowerPoint चार्ट को विशिष्ट पार्ट्स को एनिमेशन गर्नुहोस
EPM फाइल के हो?
Mail.com IMAP सेटिङहरू के हो?
ओएस एक्स मेलमा के आलेख बटन के हो सिक्नुहोस्